कसरी तपाइँको सामाजिक मीडिया मार्केटिंग लगानी मा रिटर्न गणना गर्न Martech Zone
जब मार्केटरहरू र सोशल मिडिया प्लेटफर्महरू परिपक्व हुन्छन्, हामी सामाजिक मिडियामा लगानीको उल्टो र नकारात्मक पक्षको बारेमा अधिक खोज गर्दैछौं। तपाईले देख्नुहुनेछ कि म अक्सर सामाजिक मिडिया परामर्शदाताहरु द्वारा निर्धारित उम्मीदहरु को आलोचना हुँ - तर यसको मतलब यो होइन कि म सोशल मीडियाको आलोचना गर्छु। म साथीहरूको साथ बुद्धि साझेदारी गरेर र ब्रान्डसँग अनलाइन कुराकानी गरेर धेरै समय र प्रयास बचत गर्छु। मलाई कुनै श have्का छैन कि सोशल मिडियामा मेरो समय व्यतीत भयो मेरो कम्पनी, मेरो प्रकाशन, र मेरो क्यारियरको लागि अविश्वसनीय लगानी।
यद्यपि मुद्दा दुवै अपेक्षा र मापनको विषय हो। यहाँ एक उदाहरण छ: एक ग्राहकले ट्विटर मार्फत गुनासो गर्दछ र कम्पनीले तुरुन्त प्रतिक्रिया दिन्छ, ग्राहकलाई उचित र समयमै तरिकाले यस समस्यालाई सुधार्दै। त्यो ग्राहकका दर्शकहरूले त्यो व्यवहार देख्दछन् र अब कम्पनीको सकारात्मक प्रभाव छ। तपाईं कसरी मापन मा लगानी मा प्रतिफल? समयको साथ, तपाईं आफ्नो ब्रान्डको भावना मापन गरेर र यसलाई समग्र राजस्व र प्रतिधारण गर्न को सहारा गरेर सक्षम हुन सक्नुहुन्छ… तर यो सजिलो छैन।
CM 44% सीएमओ भन्छन् कि उनीहरूले आफ्नो व्यवसायमा सामाजिक मिडियाको प्रभाव नाप्न सकेनन। यद्यपि यो सबै प्रकारका फर्महरूका लागि पूर्ण रूपमा प्राप्य छ
अधिक प्राय: होइन, कम्पनीहरूले मापन गर्न चाहन्छन् सामाजिक मिडिया मार्केटिंग आरओआई सीधा एट्रिब्युट डाउनलोड, डेमो, दर्ता, वा बिक्री ट्वीट वा फेसबुक अपडेटमा। जबकि त्यो सामाजिक मिडिया ROI को सब भन्दा कम सामान्य भाजक हो, यो सँधै व्यावहारिक हुँदैन। के तपाइँको सम्भावितहरु तपाइँको उत्पादन वा सेवा को खरीद गर्न सोशल मिडिया मा जाँदै छ? धेरै उद्योगहरूमा अत्यधिक संदिग्ध - यद्यपि यो समय समयमा हुन्छ।
सामाजिक मिडिया मार्केटिंगको लगानीमा फिर्ताको मापनका4चरणहरू
दिमागमा राख्नुहोस् कि तपाईं मापन सुरु गर्न निर्णय गरेको समयमा यी ठाउँमा हुन सक्नुहुन्न। यसको लागि तपाइँ संसाधनहरू सेट गर्न र एक बजेट कम्तिमा केही महिना को लागी तपाइँको फिर्ती के हो निर्धारित गर्न को लागी सोशल मीडिया मा काम गर्न को लागी आवाश्यक पर्न सक्छ।
मापन योग्य लक्ष्यहरू परिभाषित गर्नुहोस् - यो सजगता निर्माण को रूप मा सरल हुन सक्छ वा स engage्लग्नता, निर्माण अधिकार, रूपान्तरण, प्रतिधारण, upsell, वा समग्र ग्राहक अनुभव सुधार गर्न मा अधिक जानुहोस्।
प्रत्येक कार्यको लागि मान दिनुहोस् - यो गाह्रो काम हो, तर सामाजिक मिडियामा आफ्ना ग्राहकहरूलाई शिक्षा दिने, संलग्न गर्ने र सेवा गर्नेको मूल्य के हो? सायद तपाइँको सम्भावना र ग्राहकहरूलाई विभाजन गर्दै - जोसँग पनी अनुसरण गर्ने र तपाइँसँग अनलाइन व्यस्त हुनेहरू विरूद्ध नगर्ने तुलना गर्नुहोस्। त्यहाँ अवधारण बढेको थियो? बढ्दो अपसेल अवसरहरू? द्रुत समय बन्द गर्न? सम्झौताको ठूलो आकार?
तपाईंको प्रयासको लागत हिसाब गर्नुहोस् - कति समय लाग्छ र कसरी यसले कर्मचारी र व्यवस्थापन भुक्तानमा अनुवाद गर्दछ? तपाइँ सोशल मिडिया प्रबन्ध गर्न कति प्लेटफार्महरूमा खर्च गर्दै हुनुहुन्छ? ग्राहक सेवा मुद्दाहरूको रकम फिर्ताको लागि वा छुट गर्दा तपाईं कति पैसा खर्च गर्दै हुनुहुन्छ? के तपाइँ अनुसन्धान, प्रशिक्षण, सम्मेलनहरू, आदि मा कुनै पैसा खर्च गर्दै हुनुहुन्छ? यो सबै कुनै पनि ROI गणनामा समावेश गर्न आवश्यक छ।
ROI निर्धारण गर्नुहोस् - ((कुल राजस्व सामाजिक मीडियाको श्रेय - कुल सामाजिक मीडिया लागत) x १००) / कुल सामाजिक मीडिया लागत।
यहाँ MDG बाट पूर्ण इन्फोग्राफिक छ, कसरी मापन योग्य लक्ष्यहरू परिभाषित गर्न कभर गर्न, प्रत्येक गतिविधिलाई मूल्य प्रदान गर्ने, र मा तपाईंको प्रयासको समग्र लागत गणना। सामाजिक मिडिया आरओआई कसरी मापन गर्ने:
टैग: इंफोग्राफ़कMDG।लगानी फिर्तारयसामाजिक मिडिया कार्यसामाजिक मिडिया गतिविधिसामाजिक मिडिया लागतसामाजिक मिडिया इन्फोग्राफिकसामाजिक मिडिया रोइसामाजिक मिडिया मान